Boqorka Brunei ayaa soo saaray wareegto uu dalkiisa ugu soo rogay Shareecada Islaamka, | Dhamays Media Group
Dowladda dalka Brunei ayaa meel marisay sharci cusub oo dhanka shareecada Islaamka ah, waxaana dadka gaysta gogol-dhaafka iyagoo horey u guursaday iyo ragga isku jinsiga ah ee isku galmooda ay wajihi doonaan xukun dil ah oo dhagax loo adeegsanayo.
Waxaa xeerkan cusub la dhaqan geliyey maanta oo Arbaco ah, iyadoo sidoo kale gacanta laga jari doono qofkii lagu helo dambi ah inuu wax xaday.
Hase yeeshee, Dowladda ayaa cambaarayn kala kulantay caalamka.
Mid ka mid ah oday dhaqameedyada koonfurta bari ee Aasiya ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in “la xoojiyo” barashada diinta.
“Waxaan rabaa inaan arko ku dhaqanka diinta Islaamka inay kor u kacdo,” Ayuu yiri Sultan Hassanal Bolkiah.
Guurka ka dhexeeya dadka isku jinsiga ayaa markii horeba ahaa mid sharci darro ah, dadka lagu helana waxaa lagu ciqaabi jiray xarig 10 sano ah.
Muslimiinta ku nool dalka Brunei ayaa ah afar meelood 3 meel oo ka mid ah bulshada.
Sharciga ayaa badana waxa uu qabanayaa shacabka Muslimiinta ah, iyada oo ay jiraan qaar ka mid ah oo qabanaya dadka aan Islaamka ahayn.
Dadka kaliya ee uusan qabanaynin sharcigan ayaa ah caruurta.
Sultan Hassanal waxa uu madax ka yahay waaxda maalgelinta ee Brunei.
Boqortooyada Brunei ayaa maalgelinta ugu weyn waxa ay ka helaan shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Qaar ka mid ah jilayaasha caanka ah ayaa cambaareeyay sharcigan.
Boqorka Brunei ayaa horay u soo saaray wareegto uu dalkaas ugu soo rogay Shareecada Islaamka, iyadoo sharcigaas ay qeyb ka ahaayeen qodobbo dhigaya in dadka gacmaha laga gooyo, isla markaana dhagax lagu dilo.
Qorshaha ah in sharcigan la soo rogo ayaa lagu dhawaaqay sanad ka hor, balse dib ayaa loo dhigay.
Sharcigan cusub ayaa sidoo kale dhigaya in qofka tagi waayo Salaadda Jimcaha, la ganaaxi doono ama la xiri doono.
Dhaqangalka qeybta labaad ayaa waxaa ka mid ah in dadka Khamriga caba la karbaasho, tuugadana gacmaha laga gooyo.
Dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu yahay mid ka yimid dhanka Alle.
Previous: Ra’iisulwasaaraha Hindiya oo gabar kasoo badbaadiyay Soomaaliya
Next: “Xagga Sharciga, Dadka In Hawada Laga Xukumo Wax Bannaan Maaha..” Sheekh Aadan-Siiro + Daawo/Akhriso